အထူးပြုလေ့လာခြင်း - Presynaptic နှင့် postynaptic dopamine D2 receptors (2009) - Your Brain On Porn
အထူးပြုတဲ့: presynaptic နှင့် postsynaptic dopamine D2 receptors (2009)
Curr Opin Pharmacol ။ 2009 ဖေဖော်ဝါရီ;9(1): 53-8 ။ EPub 2009 ဇန်နဝါရီ 8 ။
de Mei ကို C, Ramos M က, Iitaka ကို C, Borrelli အီး
ကယ်လီဖိုးနီးယား Irvine, အဏုဇီဝဗေဒနှင့်မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇဌာန, 3113 Gillespie NRF, Irvine,, CA 92617 အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်။
Dopamine (DA) ထိန်းချုပ်မှုရွေ့လျားရာမှဟော်မုန်း Secret အထိအများအပြားဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချက်ပြများနှင့်စွဲလမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ DA မြင့်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ဥပမာ, တစ်ပြိုင်နက်ကွဲပြားခြားနားသော DA receptors ဖော်ပြအာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်; မတူကွဲပြားသောအာရုံခံ / receptors ထံမှတုံ့ပြန်မှုအမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာရလဒ်များ၏မျိုးဆက်အတွက်ကြိုးကိုင်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုဆဲလုံးဝသတ်မှတ်မထားပါ။ D2 receptors (D2Rs) မှအချက်ပြဒီရှုပ်ထွေးသရုပျဖျောဖို့ကောင်းတစ်ဦးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ D2Rs Vivo နှစ်ခု isoforms အားဖြင့်မျှဝေထားတဲ့ presynaptic နှင့် postsynaptic ပြည်တွင်းနှင့် functions များ, ရှိသည်။ ကြွက်နောက်ကောက်ကနေမကြာမီကရလဒ်များကိုအားဖြင့် DA အာရုံခံဇီဝြဖစ်စဉ် modulates ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားလာ site နှင့် D2 isoform-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းနေကြသည်။
သဘာဝကဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာအစားအစာ) နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်ချက် hedonic ဂုဏ်သတ္တိများမျှဝေထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသည်တစ်ဦးဦးစားပေးခန္ဓာဗေဒအလွှာဖြစ်ပြထားပြီးဖြစ်သော NACC [1-3] အဖြစ်ဒေသများအတွက် mesolimbic စနစ် dopamine (DA) အဆင့်ဆင့်ခြီးမွှော ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးသူတို့၏အမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာသက်ရောက်မှုထုတ်ယူနှင့် DA တုံ့ပြန်မှုစနစ်၏လေ့လာမှုလွယ်ကူချောမွေ့တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရန် dopaminergic system ကို exploit ။
DA သက်ရောက်မှု G-ပရိုတိန်း coupled receptor မိသားစု  ပိုင်ကြောင်းအမြှေးပါး receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှတဆင့်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်စားသုံးမှု DA အချက်ပြပေါ်၌ငါး DA receptors မဆိုကထိန်းချုပ်ထား, ပြင်းထန်စွာ D1 ကဲ့သို့ (D1 နှင့် D5) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လမ်းကြောင်း၏ဆွသို့မဟုတ်တားစီးဖို့ဦးဆောင် activated ဖြစ်ပါတယ်နှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor မိသားစု (D2, D3 နှင့် D4 ), အရာတိကျတဲ့အာရုံခံခြင်းနှင့် circuitries ၏ activation / တားစီးသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျူးများနှင့် postsynaptic DA D2 အဲဒီ receptor Vivo အတွက် (D2R) ကမကထပြုခဲ့အချက်ပြခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျယ်ပြန့်ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆို D2Rs, presynaptic dopaminergic အာရုံခံအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်း dopaminergic afferences (Fig.1) ကပစ်မှတ်ထားအာရုံခံအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ တစ်ဦးကို dual မူပြောင်းခြင်းရှိခြင်း၏အပြင်, D2 receptors အတူတူပင်မျိုးဗီဇ  ၏အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ D2S (S = တိုတောင်း) နှင့် D4L (L ကို = ရှည်လျားသော) အမည်ရှိနှစ်ခုမော်လီကျူးကွဲပြား isoforms, ကဖွဲ့စည်းတဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလူဦးရေဖြစ်ကြသည်။ D5Rs စကားရပ်ထဲမှာ [9-2] ကိုဖျက်လိုက်ပါသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဗီဇအင်ဂျင်နီယာကြွက်  Vivo အတွက် D10R-mediated လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ထုတ်အတွက်အရေးပါခဲ့ကြပြီ။ ကျနော်တို့ရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) နှင့်ခေါထွက်ကြွက်ကနေရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ် DA agonists နေဖြင့်မူးယစ်ဆေးများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ DA မြင့်တုံ့ပြန် Post-Synaptic D2R-mediated ယန္တရားများသာရှိပြီးပြည်ပမှအကျူး၏ဆွေမျိုးအလှူငွေဆှေးနှေးပါမညျ။
အကျူးများနှင့် D2L နှင့် D2S ကကမကထပြုခဲ့ postsynaptic အချက်ပြ
D2L နှင့် D2S အားဖြင့် signal transduction ကွဲပြားခြားနား postsynaptic တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်အကျူးအပေါ်သက်ရောက်မှု
DA ၏အကောင်းဆုံးစရိုက်လက္ခဏာတွေ intracellular အကျိုးသက်ရောက်မှု  တပ်ကိုလမ်းကြောင်း၏ activation ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလမ်းကြောင်း D1 ကဲ့သို့ receptors မှတဆင့် activated နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors အားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) ခုနှစ်တွင်စခန်းအဆင့်မြင့်  ပရိုတိန်း Kinase တစ်ဦးက (PKA) ၏ activation ရန်နှင့်အကျိုးဆက်ဆယ်လူလာပစ်မှတ်၏ကြီးမားသောစီးရီး phosphorylation ရန်နှင့်အရေးကြီးသည့် DA- နှင့်စခန်း-စညျးမဉျြးစညျးကမျး phosphoprotein ၏ဦးဆောင် 32 KDA (DARPP-32),  (Fig.1) ၏။ D2R ၏ပိတ်ဆို့ DARPP-32 ၏ PKA-မှီခို phosphorylation လှုံ့ဆော်။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးဖွယ်ရှိ adenylyl cyclase အပေါ် D2R နေဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ယင်းတားစီး၏ဖိနှိပ်မှုကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Thr34 အပေါ် PKA အားဖြင့် catalysed Phosphorylation ဖြင့် Camp / PKA လမ်းကြောင်း၏ activation ကထုတ်လုပ်သည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုချဲ့, PP-32 တစ်အစွမ်းထက် inhibitor သို့ DARPP-1 ပြောင်းပေးပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, D2R-mediated အချက်ပြ၏ပိတ်ဆို့  DARPP-13 တရားမဝင်သော-ကြွက်တွေမှာ attenuated သောမော်တာစိတ်ကျရောဂါအကျိုးသက်ရောက်မှု, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ D1Rs ၏ activation  ဂေါက်သီး-mediated ဆွကနေတဆင့် Thr14 phosphorylation တိုးပွားစေပါသည်။ ပြောင်းပြန် D2Rs ၏ activation  စခန်းထုတ်လုပ်မှု၏ Gi-mediated တားစီးကနေတဆင့် Thr34 မှာ DARPP-11 phosphorylation လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, D2Rs agonists အားဖြင့်  Thr32 မှာ DARPP-34 ၏ dephosphorylation တိုးမြှင့်, ပရိုတိန်း phosphatase-11B လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ခြင်း။
/ - - နှင့် D81297L - / - ကြွက်  စိတ်ဝင်စားစရာ SKF32 တစ် D34R agonist တစ်ဆယ်ခြံ WT ကြွက်တွေမှာ Thr2 မှာ DARPP-2 ၏ phosphorylation ၏ပြည်နယ်အတွက်တိုး, D15R ထုတ်လုပ်သည်။ / - - သို့မဟုတ် D2L - / - တစ်ရှူး  Quinpirole တစ် D34-တိကျတဲ့ agonist, အ WT အတွက်မဟုတ် D1R အတွက် dopamine D2 agonist ထုတ်လုပ် Thr2 မှာ DARPP-15 ၏ phosphorylation အတွက်တိုး, counteracts ။ ဒါက D2L isoform အားဖြင့် postsynaptic D2R-mediated အချက်ပြ၌ဤအဲဒီ receptor isoform ၏တိကျသောပါဝင်ပတ်သက်မှုသရုပ်ပြ MSNs အတွက် DARPP-32 phosphorylation ၏ D2 တူသောအဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်းများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
/ - - ကြွက်, ဒါပေမယ့်ထိန်းသိမ်းထားပြောင်းပြန်ဟာ substantia nigra (SN) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ၏ dopaminergic အာရုံခံအတွက်, dopamine D40 တိကျတဲ့ agonists အားဖြင့်သွေးဆောင် Ser2 အပေါ် tyrosine hydroxylase (TH) ၏ phosphorylation ၏လျော့ချရေး, D2R အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် D2L အတွက် - / - WT တစ်ရှူးထဲမှာရှိသကဲ့သို့  ။ အဓိက D2S-တိကျတဲ့ presynaptic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း။
isoform-mediated presynaptic နှင့် postsynaptic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်တိကျသောအများဆုံးဖွယ်ရှိပရိုတိန်း-ပရိုတိန်း interaction ကပျက်ပြယ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော, G-ပရိုတိန်းနှင့်အချက်ပြလမ်းကြောင်း  သို့မဟုတ် isoform-တိကျတဲ့မှတဆင့်နဲ့သေးနဲ့ဆက်ဆံဖို့ D2L နှင့် D16,17S နိုင်စွမ်းကနေဖြစ်ပေါ်လာ။
မကြာသေးမီက D2 ကဲ့သို့ receptors မှတဆင့် DA ကကမကထပြုခဲ့သည့်အချက်ပြအတွင်း serine / threonine kinase AKT ၏ဆိုလို  အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီလမ်းကြောင်း၏ activation စခန်း-လွတ်လပ်သောဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးသုံးပရိုတိန်း, ထိုငြမ်းပရိုတိန်းβ-arrestin 2, AKT နှင့် phosphatase PP-2A  င်တစ်ဦး macromolecular ရှုပ်ထွေးသော၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ striatum အတွက် psychostimulants များ၏လှုပ်ရှားမှု  တစ်ဦး D18 တူသောအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့် AKT phosphorylation နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏လျင်မြန်စွာချ-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်သည်။ / - - အရေးကြီးတာက, AKT phosphorylation D2R အတွက် psychostimulants ကုသမှုပြီးနောက်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မပေးကြောင်းနှင့် D2L - / - striata  အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မှီခို D2L ၏ activation ထံမှတိကျတဲ့ D2R-mediated အကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ဖော်။
အနာဂတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ AKT နှင့် PKA လမ်းကြောင်းအပေါ် D2R-mediated အချက်ပြ၏အစီရင်ခံသက်ရောက်မှုအပြိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကအတူတူပင်အာရုံခံအတွက် activated ရှိမရှိရှိမရှိအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။
postsynaptic အာရုံခံအတွက် D2R-mediated Pre-Synaptic လုပ်ဆောင်ချက်များကို
Nigrostriatal နှင့် mesolimbic afferences အသီးသီးအတွက် SN နှင့် VTA ကနေတံခါးဝအာရုံခံ, မော်တာနှင့် striatum မှသတင်းအချက်အလက်ဆုချ။ အဓိကဖြစ်ရပ်များအချိုမှုဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုတုန့်ပြန် DA သည်ဤသွင်းအားစုများ၏တံခါးစောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာ ventral striatum ရောက်ရှိသည့် orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အတွက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင် DA က D1R-mediated ယန္တရား  မှတဆင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချဲ့အသံဗလံကိုစစ်ထုတ်ပေးဘယ်မှာအာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာ cortical ဒေသများ  ကနေ dorsal striatum မှအချိုမှုသွင်းအားစု modulates ။
MSNs အပြင်, D2Rs လညျးအရေးကွီးဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုတွေ  နှင့်အတူ striatal interneurons [22,23] တို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်သို့သော်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ cortical, thalamic နှင့် mesencephalic afferences ကနေလက်ဆင့်ကမ်းအချက်အလက်များ၏ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, striatal အာရုံခံသာ 5% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ D2R-မှီခိုအချက်ပြမှတဆင့် MSNs လှုပ်ရှားမှုများ၏မော်ဂျူအပေါ် cholinergic interneurons ၏ပါဝင်မှု, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း [22,23] ပြသလျက်ရှိသည်။ Presynaptic D2R-mediated ယန္တရားများလည်းဂါဘမြို့သားများလွှတ်ပေးရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့် striatal နှင့် cortical အာရုံခံကနေအချိုမှု [20,24,25] ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် dopaminergic အာရုံခံ, heteroreceptors အဖြစ်သရုပ်ဆောင် D2Rs အပေါ် function ကိုပြောင်းလဲပစ်သည့် DA လွှတ်ပေးရန်အပြင်, postsynaptic အာရုံခံထံမှ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန် modulate ။ ထိုသို့သောအားဖြင့် D2Rs လွှမ်းမိုးမှု၏ presynaptic လွှတ်ပေးရန်-ပြောင်းလဲပစ်အခန်းကဏ္ဍ dopaminergic အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအလှနျပစ်မှတ်ဆဲလ်၏ပြုပြင်မွမ်းမံ။
dopaminergic အာရုံခံအပေါ် Presynaptic D2R-mediated function ကို
D2R အပေါ်လေ့လာရေး - / - ကြွက် D2 receptors DA ပေါင်းစပ်ထိန်းညှိကို "စစျမှနျသော" autoreceptors ဖြစ်ကြပြီး [26-29] လွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ striatal dialysates အတွက် DA ၏ယုတ်အခြေခံအာရုံစူးစိုက်မှု WT နှင့် D2R အလားတူနေစဉ် - / - / - - WT တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကောင်းစွာအကွာအဝေးအထက်နှိုင်းယှဉ်ပါက Mutant မောင်နှမ, ကိုကင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့် evoked DA များလွှတ်ပေးရန် D2R အတွက်သိသိသာသာမြင့်မား  ပုံမှန် WT တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ DA တိုး၏။ အလားတူရလာဒ်များမှာလည်း  morphine တုံ့ပြန်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။
D2R-mediated Auto-တားစီးမြင့်မားသော extracellular DA အဆင့်ဆင့်၏အခြေအနေများအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍသောလေ့လာရေး (ထို DA ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့်ကိုကင်းများကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအပေါ် D2R ၏ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှင်းပြမယ် DAT) ။ ထို့ကြောင့်ပစ်ခတ်ရန်နှင့် DA လွှတ်ပေးရန်တားစီးထားတဲ့သာမန်အခြေအနေများ D2R autoreceptors ၌ကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ပြန်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကျန်ရှိအချက်ဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးတာက, D2L အတွက် D2L isoform ၏ရွေးချယ် ablation - / - ကြွက်, ဆဲ D2S receptors ဖော်ပြရာ,  Vivo အတွက် D2S isoform တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် presynaptic အခန်းကဏ္ဍ၏ထောက်ခံမှုအတွက် D8R-mediated autoreceptor လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအယှက်မပေးပါဘူး။
ထို့ကြောင့်, D2S ကကမကထပြုခဲ့ D2R autoreceptor function ကိုတစ်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ pathophysiology ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှအားနည်းချက်ဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအယူအဆသွယ်ဝိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှကောက်ကာငင်ကာအားနည်းချက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များတစ် D30R binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏အနိမ့်အရေအတွက်ကို  နှငျ့လျှော့ချ somatodendritic autoreceptor sensitivity ကို  ကနေရရှိလာတဲ့ DA ဥတုလှုပ်ရှားမှု၏အနိမ့်တားစီးနေဖြင့်  စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန် DA တစ်ခုတိုးမြှင့်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ်နေကြသည်။
ဒါ့အပြင် D2Rs ၏တက်ကြွစွာ MAPK လမ်းကြောင်း  ၏ activation တော်အားဖြင့်, ပလာစမာအမြှေးပါးမှ DAT ၏လူကုန်ကူးမှုထိန်းညှိရန်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, D2Rs ကိုယ်ထိလက်ရောက် DAT  ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် D2Rs နှင့်အလွန်ဖွယ်ရှိ D2S isoform, DA ပေါင်းစပ်ထိန်းညှိဖို့အပြင်, ပြင်းပြင်းထန်ထန် DAT နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဧကန်အမှန်အလွန်အရေးပါသောအရာတို့တွင်အကွဲပြားခြားနားသောယန္တယားဖြင့်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။
ကိုကင်းများ၏မော်တာကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှု D2S ၏မရှိခြင်းအားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းတာဖြစ်ပါတယ်
အဓိကအားဖြင့်လူသားတို့စော်ကား, ကိုကင်း dopaminergic အာရုံခံ  အပေါ် DAT လှုပျရှားမှုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ယင်း၏ psychomotor နှင့်ဆယ်လူလာသက်ရောက်မှု elicits ။ အချိုမှုများနှင့် dopaminergic ရန်ကင်း [36,37] ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ (IEGs) ၏မှတ်တမ်း activation ဖျက်သိမ်း။ / - - ကြွက်  ဒီလေးစားမှုအတွက်, D1Rs ၏ activation D38R အတွက်ဖျော်ဖြေလေ့လာမှုများအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ကိုကင်းဖို့ဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ၏ induction ဘို့ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီက D1R နှင့် D2R ဆဲလ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက် Transgene ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများ, ချောင်းပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖွငျ့မြင်ထပ်မံသန့်စင်ပြီးရှိသည်နှင့်ကင်းဖို့စူးရှသောဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုများအားဖြင့် D1R- ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကဤတွေ့ရှိချက်ထောက်ခံနေကြပေမယ့်မပေး D2R-ဖော်ပြအာရုံခံ [ 39] ။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ D2Rs ၏မျိုးဗီဇ ablation, ဘာမှလျှင်ကြောင့် DA အချက်ပြပေါ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် D2R-မှီခို inhibitory အခန်းကဏ္ဍမှ, Vivo အတွက်ကင်းသက်ရောက်မှုများကိုချဲ့ထွင်သင့်ကြောင်းမျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။
D2R အပေါ်ကိုကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု - / - / - - ကြွက်မူးယစ်ဆေးမှတုံ့ပြန်မှုချို့ယွင်းကြပါပြီကြွက်ယခုစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကုသပြီးနောက်အဖြစ် D2R သောရလာဒ်များနှင့်အတူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, ဒီ D1R ၏ဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ချွတ်ယွင်း D2R-mediated အချက်ပြထဲကပေါ်ထွန်းပါဘူး - / - D1Rs တိုက်ရိုက်ဆွဖို့ကြွက် [40,41] ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ / - - D1R အတွက် unopposed D2R-mediated အချက်ပြနှင့်အညီကြွက်, D1R-တိကျတဲ့အားဖြင့် IEG က c-fos ၏ activation WT ကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇသွေးဆောင်ထိရောက်မှုဖြစ်ကြောင်း D1R ligands ၏ပြင်းအားမှာ agonists, ဒီမျိုးဗီဇ၏ activation သို့ရလဒ် / - - ကြွက်  D40R ၏ striatum ၌တည်၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကိုကင်းများကမော်တာလှုပ်ရှားမှုဆွသည်အလွန် D2R အတွက် attenuated ဖြစ်ပါတယ် - / - WT ထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနဲ့အတူကြွက်နှင့်ကထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌တိုးမြှင့်ပါဘူး [40,42] ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက D2R အတွက်ကိုကင်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေး - / - ကြွက်က c-fos (Fig.2) သွေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်။ ဤသည် D2Rs ၏မရှိခြင်းတစ်ခု inhibitory ဆားကစ်အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့် D2R ကထိန်းချုပ်ထား, MSNs အတွက်က c-fos သော induction ၏အစီရင်ခံနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကိုဦးဆောင်ထုတ်ဖော်ပြဖြစ်ကြောင်း hypothesize စေပါတယ်။ ဂါဘမြို့သားများနှင့် acetylcholine သူတို့ရဲ့လွှတ်ပေးရေး D2R-mediated ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးက c-fos သော induction (Fig.25) ပိတ်ဆို့ခြင်း MSNs အပေါ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး neurotransmitters  ၏လွှမ်းမိုးသောသို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ရှိရာဤအခြေအနေတွင်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တနည်းအား D2Rs ဆုံးရှုံးပုံမှန်  ကင်းဖို့ဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်သော D43R နှင့်အခြားပရိုတိန်းများအကြား macromolecular ရှုပ်ထွေးသော၏ဖွဲ့စည်းခြင်းချို့ယွင်း။
D2R အတွက်ကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ - / - ကြွက်, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) ကအကဲဖြတ်အဖြစ်  attenuated နေကြသည်။ / - - ကြွက် WT ကြွက်  ထက်ပိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲသို့သော် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများ D44R ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ / - - D45R အတွက်ကင်းဖို့ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စကားရပ်နှင့် Self-အုပ်ချုပ်မှုအခြား neuromodulators များ၏အလှူငွေ (ဆိုလိုသည်မှာ noradrenalin, serotonin)  ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုစောင့်ကြိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ / - - ကြွက်ဒါဟာအချက် D2R အတွက်အလွဲသုံးစားမှုအတော်ကြာအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းဖေါ်ပြခြင်းတို့သည်မြောက်မြားစွာအချက်အလက်များ၏အလငျး၌အထူးသဖြင့်ဆီလျော်သည်။ အထူးသ D2R - / - Mutant  မော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးနှင့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများမှတုံ့ပြန်ခြင်း [48-49,50] နှင့်အရက်ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးနဂိုအတိုင်း D2R-mediated အချက်ပြအရှိဆုံးမူးယစ်ဆေး၏အကြိုးနှင့်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။
အရေးကြီးတာက, D2L - / - နေတုန်းပဲ D2S ဖော်ပြနှင့် D2R-mediated autoreceptor လုပ်ဆောင်ချက်များကို [8,9,27] ကိုထိန်းသိမ်းရန်အရာကြွက်, WT တိရိစ္ဆာန်များ  ၏ဆင်တူကင်းဖို့ locomotor နှင့်ကြိုးတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုအတွက် D2S တစ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍ implicating ။
ဤရွေ့ကား, presynaptic D2R-mediated သက်ရောက်မှု DA လွှတ်ပေးရေးအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းဂါဘမြို့သား [25,51,52] အပေါ်မသာသရုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုချိုမှု  နှင့် acetylcholine  အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့တုန့်ပြန်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကျူးများနှင့် postsynaptic လှုပ်ရှားမှုများတွင်အသီးသီး D2S နှင့် D2L ၏တိကျသောပါဝင်ပတ်သက်မှုနှစ်ဦးစလုံး isoforms အာရုံခံဖော်ပြ D2R အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူးတွဲနေကြသည်ကတည်းက, တည်နေရာဖြစ်စေများတွင်အခြား isoform ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်မေးခွန်းဖွင့်အရွက်။ တစ်ခုမှာစိန်ခေါ်အယူအဆ  အမြှေးပါးမှနှစ်ဦးစလုံး isoforms ၏လူကုန်ကူးမှုညီတူညီမျှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မရအံ့သောငှါဖြစ်၏။ မောက်နည်းပညာနှင့်အသစ်သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့် tools များ၏မျိုးဆက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဒီအချက်အားရှင်းလင်းထားသည့်ကူညီသင့်ပါတယ်။
D2R Mutant ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှရရှိသောရလဒ်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တိုက်ရိုက် agonists အားဖြင့် evoked D2R-mediated အချက်ပြအတွက် D2L နှင့် D2S ၏ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပတ်သက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ D2L-mediated အချက်ပြ၏မရှိခြင်း D2Rs အားဖြင့် PKA နှင့် AKT လမ်းကြောင်း၏စည်းမျဉ်းချို့ယွင်းပေမယ်ကမော်တာများနှင့်ကင်းရန်ကြိုးတုံ့ပြန်မှုမထိခိုက်ပါဘူး။ ပြောင်းပြန် D2S-mediated အချက်ပြကိုကင်းများ၏မော်တာများနှင့်အကြိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအလွန်ဖွယ်ရှိ။ အနာဂတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်များနောက်ထပ် dopaminergic ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် postsynaptic အာရုံခံအပေါ်ကြောင်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေ, presynaptic အစိတ်အပိုင်းသည်ဤတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဆက်စပ်သောအီး Borrelli ၏ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အလုပ် NIDA (DA024689) နှင့်ဥရောပအသိုက်အဝန်း (EC အ LSHM-CT-2004-005166) မှရန်ပုံငွေကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
1 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Forebrain အလွှာဟာ။ J ကို comp Neurol ။ 2005; 493: 115-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2. Di Chiara, G, Bassareo V. ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်စွဲ: dopamine ဘာလုပ်တယ်နှင့်မပါဘူး။ Curr Opin Pharmacol ။ 2007; 7: 69-76 [PubMed]
3 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology: ရောဂါများအတွက်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး neuroadaptational အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2006; 101 ပျော့ပျောင်း 1: 23-30 [PubMed] ။
4 ။ Tan က S နဲ့, Hermann B, Borrelli အီး Dopaminergic mouse ကို Mutant: မတူညီသော dopamine အဲဒီ receptor Subtype နှင့် dopamine ပို့ဆောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေး။ int ဗြာ Neurobiol ။ 2003; 54: 145-197 [PubMed] ။
5 ။ Baik JH, Picetti R ကို, Saiardi တစ်ဦးက, Thiriet, G, Dierich တစ်ဦးက, Depaulis တစ်ဦးက, က Le Meur M က, dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Borrelli အီး Parkinsonian ကဲ့သို့ locomotor ချို့ယွင်း။ သဘာဝ။ 1995; 377: 424-428 [PubMed] ။
6 ။ ကယ်လီ MA, RM, အာသနန်းစံ SL, Zhang က, G, Saez ကို C, Bunzow JR, Allen က RG, Hnasko R ကိုဘင်-ယောနသန် N ကို, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာ Pituitary lactotroph hyperplasia နှင့်နာတာရှည် hyperprolactinemia ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 103-113 [PubMed] ။
7 ။ Jung MY, Skryabin BV, Arai M က, Abbondanzo S က, ဖူ: D, Brosius J ကို, Robakis NK နိုင်ငံရေး, HG, Pintar je, dopamine D2 နှင့် D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်များတွင် D3 Mutant မော်တာ phenotype ၏ Schmauss C. အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience ။ 1999; 91: 911-924 [PubMed] ။
8 ။ dopamine D2 receptors ၏နှစ်ခု isoforms ၏ Usiello တစ်ဦးက, Baik JH, Rouge-ပိုတငျးက F, Picetti R ကို, Dierich တစ်ဦးက, LeMeur M က, Piazza PV, Borrelli အီးထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ သဘာဝ။ 2000; 408: 199-203 [PubMed] ။
9 ။ ဝမ် Y ကို, Xu R ကို, Sasaoka T က, Tonegawa က S, Kung-အမတ်, Sankoorikal eb ။ Dopamine D2 ရှည်လျားအဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက် striatum-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမြားတှငျပွောငျးလဲဖော်ပြရန်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 8305-8314 [PubMed] ။
10 ။ Bozzi Y ကို, neurotoxicity နှင့်အာရုံကြောအတွက် Borrelli အီး Dopamine: D2 receptors ကဘာလုပ်ရမှန်းရှိသနည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 167-174 [PubMed] ။
11 ။ Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, dopamine အားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ Greengard P. Bidirectional စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 8147-8155 [PubMed] ။
12 ။ Bateup HS, Svenningsson P ကို, Kuroiwa M က, Gong က S, Nishi တစ်ဦးက, Heintz N ကို, psychostimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ Greengard P. ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 932-939 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13. Fienberg AA, Hiroi N, Mermelstein PG, Song W, Snyder GL, Nishi A, Cheramy A, O'Callaghan JP, Miller DB, Cole DG, et al ။ DARPP-32: dopaminergic neurotransmission ၏ထိရောက်မှုကိုထိန်းညှိ။ သိပ္ပံ 1998; 281: 838-842 [PubMed] ။
14 ။ Herve: D, Le Moines, C, Corvol JC, Belluscio L ကို, Ledent ကို C, Fienberg AA ကို, Jaber M က, Studler JM, Girault ဂျေအေ။ Galpha (olf) အဆင့်ဆင့်အဲဒီ receptor အသုံးပြုမှုအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့် striatum အတွက် dopamine နဲ့ adenosine အရေးယူထိန်းချုပ်လျက်ရှိသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 4390-4399 [PubMed] ။
15 ။ Lindgren N ကို, Usiello တစ်ဦးက, Goiny M က, Haycock J ကို, Erbs အီး, Greengard P ကို, Hokfelt T က, Borrelli အီး, Fisone G. အ presynaptic နှင့် postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များမှာပရိုတိန်း phosphorylation ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် dopamine D2L နှင့် D2S အဲဒီ receptor isoforms ၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2003; 100: 4305-4309 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Senogles SE ။ အဆိုပါ D2 dopamine အဲဒီ receptor isoforms adenylyl cyclase တားစီးဖို့ကွဲပြား Gi alpha ပရိုတိန်းမှတစ်ဆင့်အချက်ပြ။ site ကို-ညွှန်ကြား Mutant Gi alpha ပရိုတိန်းနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကို Biol Chem ။ 1994; 269: 23120-23127 [PubMed] ။
17 ။ Guiramand J ကို, Montmayeur JP, Ceraline J ကို, Bhatia က M, အ dopamine D2 အဲဒီ receptor ၏ Borrelli အီးအခြားရွေးချယ်စရာ splicing, G-ပရိုတိန်းမှနားချင်းဆက်မှီ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ညွှန်ကြားနေသည်။ J ကို Biol Chem ။ 1995; 270: 7354-7358 [PubMed] ။
18 ။ Beaulieu JM, Sotnikova TD, မာရီယန်က S, Lefkowitz RJ, Gainetdinov RR, caron MG တစ်ခု Akt / beta ကို-arrestin2/ PP2A ရှုပ်ထွေးအချက်ပြ dopaminergic neurotransmission နှင့်အပြုအမူ mediates ။ cell ။ 2005; 122 ။ 261-273 [PubMed] ဒီဆောင်းပါး AKT လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိမယ့်ဝတ္ထု, G-ပရိုတိန်းလွတ်လပ်သော dopamine transduction လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors ကကမကထပြုခဲ့။ အဆိုပါ AKT လမ်းကြောင်းမှအချက်ပြ AKT, β-arrestin2 နှင့်ပရိုတိန်း phosphatase PP2A င်တစ်ဦး macromolecular ရှုပ်ထွေးသော၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြသည်။ ဤသည် dopamine နဲ့ AKT ကမကထပြုခဲ့အချက်ပြအကြားဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်းပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
19 ။ Vivo အတွက် D2 နှင့် D3 dopamine receptors အားဖြင့်အချက်ပြ Beaulieu JM, Tirotta အီး, Sotnikova TD, Masri B, Salahpour တစ်ဦးက, Gainetdinov RR, Borrelli အီး, Akt ၏ caron MG စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 ။ 881-885 [PubMed] dopamine အဲဒီ receptor Mutant အသုံးပြုခြင်းသည်ဤစာရေးသူဟာ AKT လမ်းကြောင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အဓိကသရုပ်ဆောင်များကိုအဖြစ် D2Rs ခွဲခြားသတ်မှတ်။
20 ။ Bamford NS, Zhang က H ကို, Schmitz Y ကို, Wu NP, Cepeda ကို C, Levine က MS, Schmauss ကို C, Zakharenko အက်စ်အက်စ်, Zablow L ကို, Sulzer: D Heterosynaptic dopamine neurotransmission corticostriatal ဆိပ်ကမ်း၏အစုံရွေးချယ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 42 ။ 653-663 [PubMed] optical လြှပျစစျနှင့် electrophysiological ချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, ဤစာရေးသူတစ်ဦး presynaptic D2R-mediated ယန္တရားမှတဆင့် dopamine corticostriatal ဆိပ်ကမ်းကနေအချိုမှုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ယန္တရားလျော့နည်းတက်ကြွဆိပ်ကမ်းကြောင့်ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်အတွက် filter အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုထားပါသည်။
21 ။ Dell Donne KT, Sesack SR, Pickel VM က။ ကြွက် striatum ၏ GABAergic အာရုံခံအတွင်း dopamine D2 အဲဒီ receptor ၏ Ultrastructural immunocytochemical localization ။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 746: 239-255 [PubMed] ။
22 ။ ဝမ် Z ကို, Kai L ကို, နေ့ M က, Ronesi J ကို, ယဉ်နာရီ, Ding J ကို, Tkatch T က, မေတ္တာရှင် DM, Surmeier DJ သမား။ အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် corticostriatal ရေရှည် Synaptic စိတ်ကျရောဂါ၏ Dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု cholinergic interneurons ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 50: 443-452 [PubMed] ။
23 ။ Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 228-235 [PubMed] ။
24 ။ Centonze: D, Gubellini P ကို, Usiello တစ်ဦး, ရော့စီက S, Tscherter တစ်ဦးက, Bracci အီး, Erbs အီး, Tognazzi N ကို, ဘာနာ, G, Pisani တစ်ဦးက, et al ။ အဆိုပါ striatum အတွက်အချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားဂီယာ၏မော်ဂျူအတွက် dopamine D2S နှင့် D2L receptors ၏ differential အလှူငွေ။ neuroscience ။ 2004; 129: 157-166 [PubMed] ။
25 ။ Centonze: D, Picconi B, Baunez ကို C, Borrelli အီး, Pisani တစ်ဦးက, ဘာနာ, G, Calabresi P. ကင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေး D2 dopamine receptors မှတဆင့် striatal GABAergic Synaptic ဂီယာစိတ်ကျရောဂါ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 164-175 [PubMed] ။
26 ။ Dickinson SD, Sabeti J ကို, Larson GA, Giardina K ကို Rubinstein M က, ကယ်လီ, MA, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ, Gerhardt GA, Zahniser ရော်ဘာ။ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်ပြပွဲ dopamine Transporter function ကိုဒါပေမယ့် dorsal striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအတွက်အဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများကိုလျော့နည်းသွားသည်။ J ကို Neurochem ။ 1999; 72: 148-156 [PubMed] ။
27 ။ Rouge-ပိုတငျးက F, Usiello တစ်ဦးက, Benoit-Marand M က, Gonon က F, Piazza PV, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများကသွေးဆောင် extracellular dopamine အတွက် Borrelli အီးအပြောင်းအလဲများ: D2 receptors ခြင်းဖြင့်အရေးပါထိန်းချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3293-3301 [PubMed] ။
28 ။ Benoit-Marand M က, Borrelli အီး, presynaptic D2 receptors မှတဆင့် dopamine လွှတ်ပေးရေး Gonon အက်ဖ်တားစီး: အချိန်သင်တန်းနှင့် Vivo အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 9134-9141 [PubMed] ။
29 ။ Schmitz Y ကို, Schmauss ကို C, Sulzer ဃ ALTER dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာလွှာမှ kinetics ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 8002-8009 [PubMed] ။
30 ။ Rouge-ပိုတငျးက F, Piazza PV, Kharouby M က, က Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ်အဆင့်မြင့်နှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ predisposed တိရိစ္ဆာန်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ပြင်းအားအတွက်ပိုရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး။ တစ်ဦးက microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 602: 169-174 [PubMed] ။
31 ။ ချိတ်က MS, ဂျုံးစ် GH, Juncos JL, Neill DB, တရားမျှတမှု JB ။ အချိန်ဇယား-သွေးဆောင်နှင့်အခြေအနေများကိုအပြုအမူတွေအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1994; 60: 199-209 [PubMed] ။
32 ။ Marinelli M က, အဖြူရောင် FJ ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ Enhanced အားနည်းချက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2000; 20: 8876-8885 [PubMed] ။
33 ။ Bolan EA ၏, Kivell B, Jaligam V ကို, Oz က M, Jayanthi ld, ဟန် Y ကို, Sen N ကို, Urizar အီး, Gomes ငါဒေဝီ LA က, et al ။ D2 receptors တစ်ခု extracellular signal ကို-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinases 1 နှင့် 2-မှီခိုနှင့် phosphoinositide3kinase-လွတ်လပ်သောယန္တရားကနေတဆင့် dopamine Transporter function ကိုထိန်းညှိ။ Mol Pharmacol ။ 2007; 71: 1222-1232 [PubMed] ။
34 ။ Lee က FJ, pei L ကို, Moszczynska တစ်ဦးက, Vukusic B, ဖလက်ချာ PJ, အ dopamine D2 အဲဒီ receptor နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်အားဖြင့် facilitated လျူက F Dopamine Transporter ဆဲလ်မျက်နှာပြင် localization ။ Embo ဂျေ 2007; 26: 2127-2136 [PubMed] က synapses မှာ DAT လှုပျရှားမှုနဲ့ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု modulates ရာ D2Rs နှင့် DAT အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤဆောင်းပါးအစီရင်ခံစာများ။ ။
35 ။ Gainetdinov RR, caron MG ။ Monoamine ပို့ဆောင်ရေး: မျိုးဗီဇကနေအမူအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 2003; 43: 261-284 [PubMed] ။
36 ။ Konradi C. အဆိုပါ striatum အတွက် dopamine နဲ့အချိုမှု interaction က၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ Adv Pharmacol ။ 1998; 42: 729-733 [PubMed] ။
37 ။ Valjent အီး, Pascoli V ကို, Svenningsson P ကိုပေါလုသည်က S, Enslen H ကို, Corvol JC, Stipanovich တစ်ဦးက, Caboche J ကို, Lombroso PJ, Nairn AC အ, et al ။ ပရိုတိန်း phosphatase အဆငျ့ဆငျ့၏စည်းမျဉ်း convergence dopamine နဲ့အချိုမှုအချက်ပြသည့် striatum အတွက် ERK activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2005; 102: 491-496 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Xu M က, Hu XT, Cooper က, DC, Moratalla R ကို, Graybiel လေး, ဖြူ FJ, dopamine D1 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် hyperactivity နှင့် dopamine-mediated neurophysiological သက်ရောက်မှု၏ Tonegawa အက်စ်ပပျောက်ရေး။ cell ။ 1994; 79: 945-955 [PubMed] ။
39 ။ dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြကင်းနှင့် haloperidol တုံ့ပြန် striatal အာရုံခံအတွက် activation အချက်ပြ၏ပုံစံများအတိုက်အခံ Bertran-Gonzalez J ကို, Bosch ကနေ C, Maroteaux M က, Matamales M က, Herve: D, Valjent အီး, Girault ဂျေအေ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28 ။ 5671-5685 [PubMed] က dopamine D1R သို့မဟုတ် D2R ဖြစ်မြောက်ရေးများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ချောင်းပရိုတိန်းဖော်ပြအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြွက်တွေကိုသုံးပြီးအဲဒီစာရေးဆရာ Vivo အတွက်ကိုကင်းနှင့်အ haloperidol ရန်မော်လီကျူးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကြော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်။ ရလဒ်စူးရှသောကိုကင်းဆဲလ်ဖော်ပြ D1R ကြဲ MSNs ဖော်ပြအများစု D2R မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းပြသပါ။
40 ။ Welter M က, Vallone: ​​D, Samad က TA, Meziane H ကို, Usiello တစ်ဦးက, dopamine D2 receptors ၏ Borrelli အီးမရှိခြင်းကိုကင်းများက activated ဦးနှောက် circuitries ကျော်တစ်ဦး inhibitory ထိန်းချုပ်မှု unmasks ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104 ။ 6840-6845 [PubMed] D2R အသုံးပြုခြင်း - / - နှင့် D2L - / - ကြွက်ဤစာရေးသူကိုကင်းဖို့မော်တာနှင့်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှစ်ဦးစလုံး isoforms ၏မရှိခြင်းအတွက်ချို့ယွင်းဖြစ်ကြောင်းပြသ အဆိုပါ D2R ၏။ ဒါကမျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကို D2R-mediated အချက်ပြဦးနှောက် circuitries ဆုံးဖြတ်ရန်သေးတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးတာက, D2L ၌ရှိသကဲ့သို့သာ D2S ၏ရှေ့မှောက်တွင် - / - ကြွက်, ထိနျးသိမျး presynaptic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတဆင့်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှု restore နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
41 ။ ကယ်လီ MA, Rubinstein M က, Phillips ကတီဂျေ, Lessov CN, Burkhart-Kasch S က, Zhang က, G, Bunzow JR, ဖန် Y ကို, Gerhardt GA, ယူဆပါတယ် DK, et al ။ D2 dopamine အတွက် Locomotor လှုပ်ရှားမှုအဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်ဗီဇသောက်သုံးသော, မျိုးဗီဇနောက်ခံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နေဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 3470-3479 [PubMed] ။
42 ။ Chausmer AL, အဲလ် GI, Rubinstein M က, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, Katz JL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 163: 54-61 [PubMed] ။
43 ။ လျူ XY, Chu XP ကို, မော်စီတုန်း LM, ဝမ် M က, Lan HX လီ MH, Zhang က GC, Parelkar NK, Fibuch EE, Haines M က, et al ။ ကိုကင်းတုံ့ပြန် D2R-NR2B interaction က၏ Modulation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 52: 897-909 [PubMed] ။
44 ။ ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, Patel က S နဲ့, Bristow L ကို, Kulagowski J ကို, Vallone: ​​D, Saiardi တစ်ဦး, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ Borrelli အီးအခန်းက္ပ: D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor နှင့်အတူလေ့လာမှုများ ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 2977-2988 [PubMed] ။
45 ။ Rocha BA, Fumagalli က F, Gainetdinov RR, ဂျုံးစ် SR, Ator R ကို, Giros B, Miller က GW, caron MG ။ dopamine-Transporter နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 132-137 [PubMed] ။
46 ။ Maldonado R ကို, Saiardi တစ်ဦးက, Valverde အို Samad က TA, Roques ကို BP, dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ opiate ကြိုးသက်ရောက်မှု၏ Borrelli အီးမရှိခြင်း။ သဘာဝ။ 1997; 388: 586-589 [PubMed] ။
47 ။ အဲလ် GI, Pieper Jo, Rubinstein M က, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, ပညာရှိ RA ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်များတွင်ထိရောက်သောဆာပစစ်ကူအဖြစ်အစေခံရန်သွေးကြောသွင်းမော်ဖင်းအကိုက်ပျက်ကွက်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22 ။ RC224 [PubMed]
48 ။ အဲလ် GI, Pieper Jo, Levy J ကို, Rubinstein M က, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, ပညာရှိ RA ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာဦးနှောက်ဆွနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 182: 33-44 [PubMed] ။
49 ။ Phillips ကတီဂျေ, Brown က KJ, Burkhart-Kasch S ကို, အာဆင်နယ်, CD, ကယ်လီ, MA, Rubinstein M က, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ ။ အရက် preference ကိုနှင့် sensitivity ကိုသိသိသာသာ dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 610-615 [PubMed] ။
50 ။ မြင့်တက် fo, Freeman က PA ဆိုပြီး, Rubinstein M က, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာအော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုမရှိခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 152: 343-350 [PubMed] ။
51 ။ Cepeda ကို C, Hurst RS, Altemus KL, et al Flores-ဟာနန်ဒက်ဇ် J ကို, Calvert CR, Jokel ES, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ, Rubinstein M က, Ariano MA ။ D2 dopamine အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်များ၏ striatum အတွက် facilitated glutamatergic ဂီယာ။ J ကို Neurophysiol ။ 2001; 85: 659-670 [PubMed] ။
52 ။ Chesselet MF, Plotkin JL, Wu N ကို, Levine က MS ။ striatal အစာရှောင်ခြင်း-spiking GABAergic interneurons ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ prog ဦးနှောက် Res ။ 2007; 160: 261-272 [PubMed] ။
53 ။ Tirotta အီး, Fontaine V ကို, Picetti R ကို, Lombardi က M, Samad က TA, Oulad-Abdelghani M က, Edwards က R ကို, Borrelli အီး signal dopamine အားဖြင့်အမြှေးပါးမှာလူကုန်ကူးမှု D2 receptors ထိန်းညှိ။ cell Cycle ။ 2008; 7: 2241-2248 [PubMed] ။